Global Voices teny Malagasy · Janoary 2010
Mediam-bahoaka06 Janoary 2010
Alzeria, nirotsaka an-dahàrana amin'ny adin'ny fanivànana
Alzeria05 Janoary 2010
Alzeria no firenena farany indrindra nirotsaka nanatevin-daharana ireo mpanivana ny aterineto, mba tsy hanaovana bango tokana an'i Iraka, Egipta, Libia sy Libanona. Herinandro lasa izay no nisy tatitra momba ny vohikala voasakana, rehefa nitatitra ny momba ny www.rachad.org ireo mpampiasa Twitter, hoe voasakana ny vohikalan'ny hetsika ara-politika Mouvement Rachad. Nanomboka...
Emirà Arabo Mitambatra05 Janoary 2010
Madagasikara04 Janoary 2010
Lova Rakotomalala, tao amin'ny topimaso nosoratany nandritra ny volana vitsivitsy fiandohan'ny taona 2009 teto Madagasikara, tapany voalohany amin'ny fizarana telo nosoratany, no nitantara ny nahatongavan'i Andry Rajoelina, Ben'ny tanànan'Antananarivo teo aloha, hahazo ny fahefana tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana. Hotohizantsika teo amin'ny niatoan'i Lova ny raharaha. May 2009 no nahitana ny fanoherana...
Ejipta04 Janoary 2010
Tato ho ato ireo ONG goavana sy seha-pikarohana samihafa saiky maneran-tany mihitsy dia nanjary liana dia liana amin'ny fihainoana izay ambaran'ireo mpitoraka blaogy Arabo sy ny hafanam-pon'izy ireny amin'ny tontolo niomerika, ratsy vintana ireo Egiptiana mpitoraka blaogy ao amin'ny seranam-piaramanidin'ny fireneny! Toy ireo mpitoraka blaogy maro nanana olana tao amin'ny...
Sudan: Safidy stratejika ve ny maha-iray tsy mivaky?
Sodàna02 Janoary 2010
Amin'ny teny Arabo, ilay Sodane mpitoraka blaogy Ayman Hajj dia mifanakalo hevitra momba ny politikan'ny fireneny sy ny hoe nahoana ny maro amin'ny vahoaka Sodane no tsy mino intsony ny maha-iray tsy mivaky.
Japana02 Janoary 2010